Stranger Things3မှပေးသောလစာမှာ Millie Bobby Brown နှင့်အခြားအရာများဖြစ်သည် - သူစိမ်းများ
Stranger Things 3: Millie Bobby Brown သည်ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုလျှင်ဒေါ်လာ ၃၅၀ ဖြင့်ဝင်ငွေရမည်
နယူးယောက်၊ နယူးယောက် - နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်။ ။ (ဘယ်ဘက်အပေါ်မှလက်ယာရစ်) သရုပ်ဆောင်များ Sadie Sink၊ Millie Bobby Brown၊ Caleb McLaughlin၊ Finn Wolfhard နှင့် Gaten Matarazzo တို့သည် SiriusXM ၏ 'Town Hall' SiriusXM ၏ဖျော်ဖြေရေးအပတ်စဉ်ရေဒီယိုတွင် Stranger Things ၏သရုပ်ဆောင်များကိုတက်ရောက်သည်။ နယူးယောက်စီးတီး၌တည်၏။ SiriusXM အတွက် Astrid Stawiarz / Getty Images မှဓာတ်ပုံ။
Netflix မှာ Black Panther လား။ 2019 ဖေဖော်ဝါရီလတွင် Netflix သို့လာမည့် Shadowhunters Season 3B
အစီရင်ခံစာအသစ်သည် Millie Bobby Brown၊ David Harbour နှင့်အခြား Stranger Things3သရုပ်ဆောင်သူများအတွက်လစာအသစ်များကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
Millie Bobby Brown သည်ဇာတ်ကားတစ်ကားလျှင်ဒေါ်လာ ၃၅၀ ဖြင့်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည် လူစိမ်း 3, ကနေအစီရင်ခံစာအရသိရသည် CBR ။ ဘရောင်းရဲ့လစာမူလကဖွင့်ပြခဲ့သည် အမျိုးမျိုး ယခုနှစ်ထိပ်ဆုံးတီဗီလစာ ၂၀ စာရင်းတွင်ပါဝင်သည်။
netflix အပေါ်ရာသီ5flash
ဘရောင်းနှင့်ကျန်၏ သူစိမ်းများ သွန်းဒုတိယရာသီပြီးနောက်မြင့်တက်လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည်တီဗီနယ်ပယ်တွင်အထူးသဖြင့်ဤ Netflix မူရင်းစီးရီးကဲ့သို့လူကြိုက်များသောတီဗီဇာတ်လမ်းတွဲအတွက်ဖြစ်သည်။
အစီရင်ခံစာအရဘရောင်းသည်ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုစီအတွက် David Harbour နှင့် Winona Ryder ကဲ့သို့သောအရာများကိုပြုလုပ်သည်။ ငါသရုပ်ဆောင်ထိုက်တန်ဘယ်လောက်သို့ရလိုကြိုက်ကြဘူးနေစဉ်, ဘရောင်းဒီပြပွဲဒါကောင်းသောကြောင်းမဆိုသကဲ့သို့အကြောင်းပြချက်၏ကြီးမားသောဖြစ်ပါတယ်။ သူမ၏လက်ရှိလစာမှာအပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်သူသည် Netflix ထက် ပို၍ တန်ဖိုးရှိနိုင်သည်။ ပရိသတ်များသူမ၏ဇာတ်ကောင်ကိုချစ်!
ဆက်စပ်ပုံပြင်:ဟော့ကင်းနှင့်အကောင်းဆုံးစိတ်ကူးယဉ်တီဗီမြို့ ၃၀ ဖြစ်သည်
အစောပိုင်းအစီရင်ခံစာများအရ Brown, Harbour နှင့် Ryder တို့သည်ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုစီအတွက်ဒေါ်လာ ၁၀၀ ကို Gaten Matarazzo၊ Noah Schnapp၊ Caleb McLaughlin၊ Finn Wolfhard, Joe Keery, Natalia Dyer နှင့် Charlie Heaton တို့ပါဝင်သည်။ ရာသီ2အသစ်ရောက်ရှိလာသူများဖြစ်သည့် Sadie Sink နှင့် Dacre Montgomery တို့ကဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုစီအတွက်ဒေါ်လာ ၁၅၀ ဖြင့်ရကြသည်။
အထူးသဖြင့်လူကြိုက်များသည့်ပွဲများတွင်သရုပ်ဆောင်များမည်မျှငွေရှာသည်ကိုကြည့်ခြင်းသည်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည် သူစိမ်းများ။ ငါသည်လည်းသရုပ်ဆောင်များကိုအားလုံး Variety အားဖြင့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသောသူကဲ့သို့လစာအတွက်ဆွဲနေကြသည်ထွက်အဲဒီမှာရှိတယ်ထင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အဲဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။
3 မကြာမီထုတ်လုပ်မှုထုပ်ပိုးသင့်သည်။ ရာသီသစ်ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်နွေရာသီတွင် Netflix တွင်ဖြန့်ချိရန်စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ Netflix သည်ရာသီသစ်အတွက်လွှတ်ပေးမည့်နေ့ကိုမည်သည့်အချိန်တွင်ကြေညာမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သေချာစွာပြောမည်။ ဆက်ပြီးနားထောင်ပါ!
သူစိမ်းများ နေ့သည်နိုဝင်ဘာ ၆ ရက်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်စီးရီးအတွက်နောက်တွဲယာဉ်အသစ်သို့မဟုတ်ကြော်ငြာတိုကိုကြည့်ပါ။
Jane သတို့သမီးကညာရာသီ3လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲ Netflix
Riverdale Netflix မှကြွလာ